Amasiko - Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd.
Umbono webhizinisi (bonisa isikhundla nenkolelo yabaphathi abaphezulu)
A. Iba umphakeli ngokuncintisana kakhulu e ngokunemba machining umkhakha
B. Ngemishini emihle kakhulu nobuchwepheshe obuhle kakhulu ukuze ube ngumhlinzeki wesevisi osekela kakhulu embonini yokwenza ngokunemba
C. Dala umphakeli wokunemba ngemishini osezingeni eliphakeme
Umsebenzi webhizinisi: (ngokubonakaliswa kwesibopho esithile senhlalo)
Ukuthatha imishini ye-CNC ngokunemba njengomthwali, kudala inani lamakhasimende futhi kuqaphela ukuvunwa okuphindwe kabili komoya womsebenzi nempucuko yempahla.
Inqubomgomo yekhwalithi:ikhwalithi esezingeni eliphakeme, ubuhle; ukuthuthuka okuqhubekayo, ukwaneliseka kwamakhasimende
Inqubomgomo yezemvelo:konga amandla futhi wehlise imfucuza; vikela umhlaba futhi uvikele ukungcoliswa komhlaba;
Kufanele sithobele imithetho nemithethonqubo, sikhuthaze okuluhlaza, senze ukuqeqeshwa kube yibo abaningi futhi sithuthuke ngokuqhubekayo.
Amanani ayisisekelo: ukusebenza ngokucophelela, imali engenayo kanye nokusetshenziswa kwemali, ukuphathwa kobuqotho, ukufezekiswa kwamakhasimende.
"IKhasimende" lapha kusho ukumela amakhasimende, abasebenzi, abahlinzeki, amabhizinisi kanye nomphakathi!
Ifilosofi yebhizinisi: umzabalazo, ukuqamba izinto ezintsha, ubungani nokuzinikela, okusebenza kahle futhi okusebenzayo.
Ukulwa:ukusebenza kanzima yisimo sawo sonke sokusebenza kanzima. Uma sesiyekile, sizosuswa. Ngakho-ke, sigcizelela ukuthi kufanele sihambisane, sikhuthaze ukudlula ngesikhathi esifanele, simelane nokungacabangi ngokuthuthuka;
Ukuthuthukiswa Nokusungula:emisha inganweba isikhala sokusinda sebhizinisi. Ngesisekelo sokuhambisana nemithethonqubo, bonke abasebenzi bangabamba iqhaza emikhakheni eminingi njengokuqalwa kwesistimu kanye nokwenza inqubo emisha ngemisebenzi ebanzi yokufunda, ukuze babone konke ukuqamba kwabasebenzi;
Ubuzalwane nokuzinikela:abantu abaqondiswe kuyifilosofi yebhizinisi eyinhloko kaJixin. Sikhuthaza isiko lomndeni futhi sivumela amalungu omndeni avela emhlabeni wonke ukuba ahlangane futhi athandane, aqoqe amandla, azimisele ukunikela, asizane, athande umsebenzi futhi athande uWally, futhi abheke inkampani njengekhaya;
I-Pragmatic futhi isebenza kahle:ngomqondo wobunye, ukubambisana ngobuqotho futhi ungalokothi ugweme umthwalo wemfanelo, singakwazi ukufeza umgomo kahle. Ngomshini osebenzayo, sikwazi ukuxhumana ngempumelelo, sixhumanise futhi sixazulule inkinga ngokuphelele, siqale ekugcineni.